के हामी मेलमिलापको शिक्षा दिन्छौं? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
केही मानिस तर्क गर्छन् कि त्रिएकको ईश्वरशास्त्रले विश्वव्यापी शिक्षा सिकाउँछ, अर्थात् सबैको उद्धार हुनेछ भन्ने धारणा। किनभने त्यसले राम्रो होस् या नराम्रो, पश्चाताप गर्ने वा नहोस् वा उसले येशूलाई स्वीकार्यो वा अस्वीकार गरेकोमा केही फरक पर्दैन। त्यसैले त्यहाँ कुनै नरक छ।
यस दावीसँग मसँग दुई समस्याहरू छन्, जुन एक झूट हो:
एउटा कुरा त, त्रिएकमा विश्वासको लागि सबै मेलमिलापमा विश्वास गर्नु आवश्यक पर्दैन। प्रख्यात स्विस धर्मविद् कार्ल बार्थले न त विश्वव्यापी शिक्षा सिकाए, न त ईश्वरविद् थॉमस एफ टोरन्स र जेम्स बी टोरन्स। अनुग्रह अन्तर्राष्ट्रिय मा (WKG) हामी त्रिएकको धर्मशास्त्र सिकाउँदछौं, तर विश्वव्यापी मेलमिलापलाई होइन। हाम्रो अमेरिकी वेबसाइटले निम्न कुरा भन्छ: सबै मेलमिलाप गलत धारणा हो, जसले दाबी गर्दछ कि संसारको अन्तमा मानव, परी र राक्षसी प्रकृतिका सबै आत्माहरू परमेश्वरको अनुग्रहले मुक्ति पाएका छन्। केही विश्वव्यापीहरू यहाँसम्म कि परमेश्वरतर्फ पश्चाताप र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु आवश्यक छैन भनेर विश्वास गर्न यहाँसम्म पुगेका छन। विश्वव्यापीहरू ट्रिनिटी सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्छन् र धेरै मानिसहरू जो विश्वव्यापी मेलमिलापमा विश्वास गर्छन् एकतावादी छन्।
कुनै बाध्य सम्बन्ध छैन
सबै मेलमिलापको विपरित, बाइबलले सिकाउँदछ कि एक मात्र येशू ख्रीष्ट मार्फत मुक्ति पाउन सकिन्छ (प्रेरित १:)) उहाँ मार्फत, परमेश्वर आफैले हाम्रो लागि छान्नुभएको हो, सारा मानवता छानिएको छ। तथापि, यसको मतलब यो होइन कि सबै मानिसहरूले यस उपहारलाई परमेश्वरबाट ग्रहण गर्दछन्। सबै व्यक्ति पश्चाताप गरेको परमेश्वर चाहानुहुन्छ। उनले मानिसहरूलाई सृष्टि गरे र उनीहरूलाई ख्रीष्टमार्फत जिउँदो सम्बन्धको लागि छुटकारा दिए। वास्तविक सम्बन्धलाई कहिले पनि जबरजस्ती गर्न सकिदैन!
हामी विश्वास गर्दछौं कि ख्रीष्ट मार्फत, परमेश्वरले सबै मानिसहरूका लागि दयालु र न्यायी व्यवस्थाको सिर्जना गर्नुभयो, उनीहरूले मृत्युसम्म सुसमाचारमा विश्वास गरेनन्। त्यसो भए पनि, जसले आफ्नो रोजाइको कारण परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्छन् उनीहरूले मुक्ति पाउँदैनन्। बाइबलका नराम्रो पाठकहरूले बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा हामी जान्दछौं कि अन्तमा सबैले पश्चाताप गर्नेछन् र त्यसैले परमेश्वरबाटको छुटकाराको उपहार पाउन सक्ने सम्भावनालाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौं। यद्यपि, बाइबल पदहरू निर्णायक छैनन् र यस कारणले हामी यस विषयमा असन्तुष्ट छैनौं।
अर्को कठिनाई उत्पन्न हुन्छ:
किन सबै व्यक्तिहरू मुक्ति पाउने सम्भावनाले नकारात्मक मनोवृत्ति र विधर्मको निन्दाको कारण हुनुपर्दछ? प्रारम्भिक चर्चको धर्म पनि नरकमा विश्वास गर्ने कुराको आधारमा थिएन। बाइबलीय रूपक उपमाहरुले ज्वाला, चरम अन्धकार, चिच्याउने र बडबड गर्ने दाँतको कुरा गर्छन्। तिनीहरू त्यस्तो परिस्थिति प्रतिनिधित्व गर्दछ जब व्यक्ति सदाको लागि हराउँछ र यस्तो संसारमा बस्दछ जहाँ आफू आफूलाई आफ्नो वातावरणबाट अलग गर्दछ, आफ्नै स्वार्थी हृदयको चाहनाहरूको लागि समर्पण गर्दछ र सचेतपूर्वक सबै प्रेम, दया र सत्यको स्रोत हो। अस्वीकार
यदि तपाईंले यी रूपकहरूलाई शाब्दिक रूपमा लिनुभयो भने, तिनीहरू डराउने छन्। जहाँसम्म, रूपकहरूलाई शाब्दिक रूपमा लिनुहुँदैन, तिनीहरू केवल विषयको बिभिन्न पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि हुन्। यद्यपि उनीहरूमार्फत हामी त्यो नरक देख्न सक्छौं, यो अवस्थित छ वा छैन, त्यो ठाउँ होइन। सबै मानिस वा मानवजाति वा बचाउनेछ र कसैलाई नरकको पीडा भोग्नु हुँदैन भन्ने भावनात्मक अभिलाषालाई स्वचालित रूपमा व्यक्तिलाई विद्रोही बनाउँदैन।
के इसाईले चाहँदैन कि जो अहिलेसम्म सबैले पश्चाताप गरोस् र परमेश्वरसँगको मेलमिलाप माफी प्राप्त गरोस्? पवित्र आत्माले सबै मानिसजातिलाई परिवर्तन गर्नेछ र स्वर्गमा सँगै हुनेछन् भन्ने विचार एउटा चाहना हो। र यो वास्तवमा ईश्वरको चाहना हो! उहाँ सबै मानिसहरू उहाँतर्फ फर्केको र उहाँको प्रेमको प्रस्तावलाई त्यागेको नतिजा भोग्न नपरोस् भनेर चाहनुहुन्छ। परमेश्वर यसका निम्ति चाहानुहुन्छ किनकि उहाँ संसार र यसमा भएका सबै थोकहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ: «किनकि परमेश्वरले संसारलाई आफ्नो एकमात्र पुत्र दिएर उहाँलाई प्रेम गर्नुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्ने सबै हराउँदैन, बरु अनन्त जीवन हुनुको लागि" (यूहन्ना १:3,16:१) अन्तमा बेलुकाको खाना खानुहुँदा येशू आफैले यहूदा इस्करियोत, आफ्नो विश्वासघाती येशूझैं हाम्रा शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न परमेश्वर हामीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १:: १; २)) र क्रूसमा उहाँको सेवा गर्नुभयो (लूका २:23,34:) माया गर्‍यो।
भित्रबाट बन्द छ?
यद्यपि, बाइबलले ग्यारेन्टी दिएको छैन कि सबै मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार्दछन्। यसले यो चेताउनी पनि दिन्छ कि यो धेरै सम्भव छ कि केही व्यक्तिहरूले परमेश्वरको क्षमाको प्रस्तावलाई र यससँग सम्बन्धित मुक्ति र स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्। यद्यपि, कसैले यो निर्णय गरेमा विश्वास गर्न गाह्रो छ। अनि यो झनै अनपेक्षित छ कि कसैले परमेश्वरसँग मायालु सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्दछ। आफ्नो पुस्तक दि ग्रेट डिभोर्समा सीएस लुइसले वर्णन गरे: «मलाई सजिलैसँग विश्वास छ कि एक किसिमले निन्दा गरिएको मान्छे अन्ततः सफल विद्रोहीहरू हुन्; नरकको ढोका भित्रबाट बन्द छ।
सबैको लागि भगवानको इच्छा
हाम्रा निम्ति ख्रीष्टले गर्नुभएका प्रभावकारिताको विश्वव्यापी वा ब्रह्माण्डको सीमासँग ब्रह्माण्डवादलाई गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन। सम्पूर्ण मानवजाति येशू ख्रीष्टमार्फत छानिएका हुन्छन्, उहाँ परमेश्वरले चुन्नुभएको व्यक्ति हो। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि हामीले निश्चित रूपमा भन्न सक्छौं कि सबै मानिसहरूले अन्ततः परमेश्वरबाटको यो उपहारलाई स्वीकार्दछन्, हामी यसको लागि निश्चित रूपमा आशा गर्न सक्छौं।
प्रेरित पत्रुस लेख्छन्: “कसै-कसैलाई आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई प्रभुले ढिलाइ गर्नुहुन्न; उसले तपाईंसँग धैर्यता राख्दछ र कसैलाई गुमाएको चाहँदैन, तर सबैले बस भेट्टाऊन् » (१ पत्रुस १: २) नरकको कष्टबाट हामीलाई स्वतन्त्र पार्नको लागि परमेश्वरले उहाँलाई सम्भव तुल्याउनुभयो।
तर अन्तमा, जसले उहाँको प्रेमलाई जानेर अस्वीकार गर्छ र उहाँबाट टाढा जान्छ उहााले गरेका सचेत निर्णयलाई भगवानले उल्लंघन गर्नुहुने छैन। किनभने तिनीहरूको विचार, इच्छा र हृदयलाई वेवास्ता गर्न, उहाँले तिनीहरूको मानवता पूर्ववत गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई सिर्जना गर्नुहुन्न थियो। यदि उसले त्यसो गर्यो भने त्यहाँ कोही त्यस्तो मानिस हुनेछैन जसले परमेश्वरको अनुग्रहको सबैभन्दा अनमोल उपहारलाई स्वीकार गर्दछ - येशू ख्रीष्टमा जीवन। परमेश्वरले मानिसजातिको सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरूलाई बचाउनुभयो जसले तिनीहरू उहाँसँग साँचो सम्बन्ध राख्न सक्दछ र त्यो सम्बन्धलाई लागू गर्न सकिँदैन।
सबै ख्रीष्टसँग एकतामा छैनन्
बाइबलले विश्वासी र अविश्वासी बीचको भिन्नतालाई धमिलो पार्दैन, र हामीले पनि पाउँदैनौं। जब हामी भन्छौं कि सबै व्यक्तिहरू क्षमा भएका छन्, ख्रीष्टले मुक्ति गर्नुभयो र परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुभयो, यसको मतलब यो हो कि हामी सबै ख्रीष्टका हौं, सबै जना उहाँसँग सम्बन्धमा छैनन्। जबकि भगवानले सबै मानिसमा आफैंलाई मिलाप गर्नुभयो, सबैले यो मेलमिलाप स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसकारण प्रेरित पावलले भने, "किनकि परमेश्वर ख्रीष्टमा हुनुहुन्थ्यो र संसारलाई आफैंमा मिलाप गर्नुभयो र उनीहरूको पापलाई उनीहरूको विरूद्धमा गणना गर्नुभएन र मेलमिलापको वचनलाई उठाउनुभयो। यसकारण अब हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं किनकि परमेश्वरले हामीलाई अर्ती दिनुहुन्छ; त्यसोभए अब हामी ख्रीष्टको सट्टा बिन्ती गर्छौं: परमेश्वरसित मिलाप गर! ” (१ कोरिन्थी १२: -2-।) यस कारणले, हामी मानिसहरूलाई न्याय गर्दैनौं, तर उनीहरूसँग भनौं कि परमेश्वरसँगको मेलमिलाप ख्रीष्टद्वारा सम्पन्न भएको छ र सबैको लागि प्रस्तावको रूपमा उपलब्ध छ।
हाम्रो चिन्ता भनेको परमेश्वरको चरित्रको बारेमा बाइबलीय सत्य साझा गरेर हाम्रो जीवनको अभिव्यक्ति हुनुपर्दछ - ती हाम्रो विचार र वातावरण हाम्रो वातावरणमा मानव हुन्। हामी ख्रीष्टको सम्पूर्ण समावेशी शासन सिकाउँछौं र सबै मानिससँग मेलमिलापको आशा गर्दछौं। बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वर कसरी सबै मानिसहरु पश्चाताप मा उहाँकहाँ आउन र उहाँको क्षमा स्वीकार गर्न को लागी चाहानुहुन्छ - जुन हामी पनि महसुस गर्छौं।